Ciqaab ayaad ku mudan kartaa inaad shaqeyso, hadii shaqada lagaa fariisiyay(Nav). - NorSom News
Ciqaab ayaad ku mudan kartaa inaad shaqeyso, hadii shaqada lagaa fariisiyay(Nav).
Ilaa 400.000 qof ayaa bishii lasoo dhaafay lagu sameeyay shaqo ka firiisin(Permitering), sababo la xiriira xaalada bandowga xanuunka corona-virus. Waxaa dadka shaqada laga fariisiyay, ay iska diiwaangaliyeen, mushaarna ka heli doonaan xafiiska shaqada ee NAV.
Warbaahinta Norway qaarkood ayaa maalmihii tagay qoray warar la xiriira inay jiraan shirkadaha qaarkood oo shaqaalaha ka codsaday inay shaqeeyaan, iyada oo shaqaaluhu ay NAV iska diiwaangaliyay in shaqada laga fariisiyay. Waxeyna shaqaalaha qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen inay rabaan inay caawiyaan goobtooda shaqo, si aysan suuqa uga bixin, balse waxaa mushaarkooda bixiyo hey´adda NAV.
NAV ayaa dhankeeda sheegtay in qofka uu ciqaab ku mudan karo inuu shaqeeyo, isaga oo sii diiwaangaliyay in shaqadii laga fariisiyay(permitert), isla markaana mushaar ka qaato NAV. Sidoo kalena laga soo celin karo lacagtii la siiyay, hadii ay ku cadaato inuu shaqeynayay.
Dhanka kale, hadii uu qofku soo diiwaangaliyay in shaqada qeybteed laga fariisiyay(Delvis permitert), waxey sheegeen inuu shaqeyn karo , balse ay tahay inuu soo gudbiyo saacadaha uu shaqeeyay, si lacagta NAV looga jaro mushaarka uu shaqeystay.
Xigasho/kilde: Permittert, men jobber likevel? Da kan du bli straffet – også for ulønnet arbeid.
Previous articleIskuulada Oslo iyo xanaanada oo ay dhici karto inaan la furin 20-ka April.
Next articleDaawo: Dr. Abdi Gele: In lasoo bandhigo tirada soomaalida xanuunka qaaday, ayaan ku taliyay.